छुट्टै काव्यवाटिका | प्रवीण बानियाँ | Prabin Baniya
Written on October 20th, 2014 by Prabin
Posted in पुस्तक-समीक्षा
अझै पनि हामीकहाँ हुलाक सेवामा काम गर्ने मान्छेजस्ता कविहरु छन् । हुलाक सेवा जसलाई अहिले मोबाइल, कम्प्युटर र इन्टरनेटजस्ता प्रविधिले लगभग विस्थापन गरिसक्यो । यसरी हुलाक सेवाको उपयोगिता सकिसक्दा पनि हुलाकीहरु अझै पनि आफूहरुको सेवाको उपयोगिता रहिरहेको भ्रममा छन् । कतै हाम्रो कविताकर्म पनि हुलाक सेवाजस्तो मात्रै त छैन ? यसतर्फ सोच्न ढिला पो भइसक्यो कि ’ समय, समाजका अन्तरवस्तुहरु बद्लिसकेको अवस्थामा कविहरु बद्लिन सकेनन् भने अन्य कुराले कवि र कवितालाई ठाउँ प्रशस्त गरिदिन्छन् । जब प्रविधि र बजारले कवि र कविताको विकल्प चौडा गरिदिन्छ, त्यो कविताको निम्ति निर्दयी समय हुन सक्छ । भन्नुको अर्थ अब पनि समाजकेन्द्रित नभएर कवितामा आत्माकेन्द्रित पीडा नै बोलिराख्ने हो भने कवि र कविता थप एक्लिन सक्छन् । अबको समयमा हाम्रा कविहरुलाई यो चिन्ताले भत्भति पोल्नुपर्छ ।
चित्रकार कवि चन्द्र रानोहोंछाको पहिलो कविताकृति ‘थिबिया चराको गीत’ हालसालै प्रकाशनमा आएको छ । कृतिमा फरकÐफरक विषयवस्तुलाई छोएर विभिन्न कालखण्डमा लेखिएका ४० कविता स»्ग्रहित छन् । मोटाइका हिसाबले औसत देखिने ‘थिबिया चराको गीत’ चल्तापुर्जा कविताको थुप्रोभन्दा अग्लो उचाइ लिएर उभिन पुगेको छ । कसैले स्थापित गरेको कविताको łफम्र्याटलाई पछ्याएर कुनै कविको अलग पहिचान निर्माण हुने हैन, न त हाम्रो काव्यसमृद्धि नै हुन्छ । फरक पहिचानको खोजिले फरक कामकै माग गर्दछ । आफ्नै शैली र शिल्पको आव्हान गर्दछ । कविता लेखनमा चन्द्र त्यही फरक कुरा लिएर आएका छन् । थाहा छैन, उनका कविताले कतिलाई छुन्छ, कतिलाई छुँदैन तर केही फरक स्वाद, केही फरक र» र केही फरक पहिचान बोकेर काव्यआकासमा उडान भर्न निस्किसक्यो, łथिबिया चराको गीत ।
कविताको सन्दर्भमा प्रसिद्ध भारतीय कवि केदारनाथ सिंहले एकपल्ट गम्भीर कुरा गरे । उनले एउटा कविता गोष्ठीमा ‘सरल देखिन कवितालाई सरल बनाउन नहुने’ धारणा राखे । उनले भनेका थिए, ‘सरल कविताका नाममा प्राणहीन शब्दहरुको थुप्रो नलगाऊ ।’ यही सन्दर्भमा फ्रेन्च प्रखर कवि एभेज बोनफोयको प्रतिकात्मक भनाइ छ । उनले पेरिसमा धेरैवर्ष पहिले भएको एउटा कवि सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘कविताको भाषा र सौन्दर्यलाई अनावश्यक शब्दहरुले किचेर भद्या कविता लेख्नु दुर्घटनाजस्तै हो ।’ हामी यी दुवै कथनको संश्लेषणबाट अबका कविता कस्ता र कसरी लेख्ने भन्ने आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्छौं । पछिल्लो समयमा नेपाली कविताको मूलबाटोमा त्यही आवश्यकता पूरा गर्न केही प्रतिभासाली कविहरु निस्किएका छन् । कवि चन्द्र रानोहोंछा त्यहीँकतै छन् ।
चन्द्रका कवितामा विषयवस्तुको विविधता छ । उनका कविताका पहेँलीहरु फरकÐफरक छन् । देशप्रेम, प्रकृतिप्रेम, मानवता असल कविहरुको साझा विशेषता हो । त्यही नै कविहरुको पुँजी पनि हो । यो प्रवृत्ति चन्द्र र उनका कवितामा पनि पाइन्छ । यस्तोखाले साझापनका साथ उनी आम कविको भिडमा एकपाइला अघि सरेका छन् । उनको अलग काव्यशिखरको आरोहण निकै रमाइलो छ । मुद्धाका हिसाबले हेर्दा उनका कविताहरु आवाजविहिनहरुको आवाज बनेर आएका छन् । अधिकांश कविताहरु लामो समयदेखि राज्य व्यवस्थाद्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपले दबाइएका उत्पीडित वर्गको न्यायको पक्षमा मुखरित छन् । वास्तवमा कुनै विभेदपूर्ण राज्यमा भुइँबाट कुनै कविले बोल्ने र लेख्ने कविताको भाषा यही नै ।
चन्द्र रानोहोंछाका कवितामा पाइने सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो- भाषाको प्रयोग र त्यसको शसक्तता । उनका कवितामा भाषाको जति सुन्दर प्रयोग भएको छ, अभिव्यक्ति त्यतिकै प्रभावपूर्ण छ । जब शब्दहरु उनका कवितामा पुग्छन्, तिनीहरु अनायास चतुर हुन थाल्छन् । तिनीहरुले अलि बढी अर्थ दिन थाल्छन्, रहस्य छाड्न थाल्छन्, वास्तवमा चन्द्रका कविताको असली शक्ति यही हो । पूरानै कविता लेखन र पठनमा रमाइरहेकाहरुले चन्द्रका कविता मिल्काउँछन्, च्पाप्दैनन् । तर हाम्रो कवितामा वैकल्पिक शक्ति र सौन्दर्य पर्खिरहेकाहरुले उनका कवितालाई बडो जतनले सम्हाल्छन् । असल पाठकका निम्ति उनका कविता विकल्प हुन् । लाग्छ, पाठकहरुले त्यो विकल्पको प्रशस्तै लाभ उठाउँछन् र एकपटक कविताको स्वाद फेर्छन् ।
कसले छाडेको होला
आँसु पुछेको यो रुमाल
हेर्न चाहान्छु म फुकाएर
ए चप्लेटी ढु»्गा ’
तिमीमाथि बिसाएर भर्खरै
भीरतिर गएको छायाँ कसको हो ?
असल कविताले समाजमा छोपिएर रहेका कुराहरुलाई दृश्यमा ल्याउँछ भन्ने उदाहरण हुन्, चन्द्रका कविता । यी कविताहरु पढ्दै गर्दा यो महसुस भइरहन्छ । कविले आफ्ना कवितामा स्थानीकताप्रतिको सम्बोधनलाई विशेष जोड दिएका छन् । भूगोल र जनजीवनअनुसारको भाषा र शैलीलाई बडो लोभ लाग्नेगरी कवितामा उनिएको छ । कवितामा पाइने आञ्चलिक प्रतीक, त्यहीअनुसारको स»्गीत र लयको प्रयोग लोभलाग्दोमात्रै छैन, आवश्यकीय पनि छ । किराँत सौन्दर्य र त्यसका मिथकहरु उनका कवितामा सुन्दर ढ»्गले आएका छन् । कुनै समुदायविशेष लवज, रहनसहन र सँस्कृतिलाई जोड दिँदा कविलाई यदाकदा एकपक्षीय बनेको आरोप पनि लाग्ला । तर उनले नियोजित रुपमा त्यसो नगरी आम कविधर्म पूरा गरेका छन् । कविमाथि त्यस्तो आरोप सिर्जना गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना, त्यसको निरन्तरता र असरलाई बिर्सनु हुँदैन ।
कवितामा महसुस गर्नुमात्रै पर्याप्त मानिँदैन । महसुस गर्दा गर्दै सोच्न पनि आवश्यक हुन्छ । विचारका पक्षलाई समय-संवेदनाको अनिवार्य शर्तको रुपमा लिइन्छ नै । कविको काव्यिक कौशलताको पनि यही ठाउँमा परिक्षण हुन्छ । विचारशीलता कवि मनको प्रमुख आधार हो । यी पक्षबाट हेर्दा चन्द्रका कविता धेरै हदसम्म पूर्ण छन् । यिनका कवितामा वर्तमानप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण, भविष्यप्रतिको गहिरो चिन्ता, समाजको पुर्नसंरचना, सबैखाले उत्पीडनको अन्त्य गरी समाजलाई नयाँ ढ»्गबाट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई कवितामार्फत् औंल्याइएको छ । कवितामा भावनामात्रै पोखिंन्न, विचार मूख्य हुन्छ । यौटा प्रतिभासाली कविले कवितामा कसरी दृष्टिकोण निर्माण गर्छ, त्यसको प्रस्तुती र व्यवस्थापनमा कतिको विवेक लगाउँछ, कलाको लय कसरी निर्माण गर्छ र कविताको भाषाÐसौन्दर्यलाई बचाउँछ भन्ने कुरा कुनै क्षमतावान् कविलाई छाम्ने आधार हुन् । यहाँ चन्द्रले त्यसका लागि गरेको मेहनत पर्याप्त नभए पनि सन्तोषजनक छ ।
होसियार रहनू !
मेरो कविता छ
जुन कविताभित्र छ आगो ….।
चन्द्रका कविताको अलग स्वभाव छ । उनी कवितामार्फत् सहज र शालिन विद्रोह बोल्छन् । यथास्थितीसँग उनी पनि अरुजस्तै असन्तुष्ट नै छन् । उनीसँग पनि छन्, यावत् विमतिहरु । कति ठाउँमा त उनी वर्तमानसँमात्रै असन्तुष्टि पोख्दैनन्, आफैँविरुद्ध पनि उनको व्यापक असन्तुष्टि छ । तर त्यो असन्तुष्टि पोख्न उनी चर्को बोल्दैनन् । कवितामा अराजकता प्रस्तुत गर्दैनन् । त्यस्तो असन्तुष्टि र विरोध मौन र हार्दिकताका साथ उठ्छ । तर कवितामा त्यसको प्रभाव चाहीँ गहिरो र स्थायी हुन्छ । यौटा असल कविताका निम्ति यो ठूलो पुँजी हो । चन्द्र स्वयंलाई भने łथिबिया चराको गीतभित्रका कविताहरु ‘केÐके न हुन्’ भन्ने लागेको छैन । र, łती केही पनि होइनन् भन्ने पनि लागेको छैन । बरु, उनी थुप्रै चुनौतिमाझ पेश भएका छन् । कविताको जिम्मेवारीले उनलाई लखेट्न सुरु गरिसकेको छ ।
‘थिबिया चराको गीत’ भित्र केही कविताहरु कृतिमा संख्या बढाउनकै लागि राखिएझैँ देखिन्छन् । फलतः कृतिको अनुहारमा केही धब्बाजस्तो पक्कै देखिएको छ । बाँकी कविताहरु औसत छन् । केही कवितामा यथार्थको सूक्ष्म भेदन, त्यसको कलात्मक अभिव्यक्तिमा तीब्र काव्यिक चेतको अभाव खड्किन्छ । गहिरो अध्ययन र नियमित साधनाको बलमा यस्ता कमजोरीलाई कम गर्न सकिन्छ । यौटा असल कविका निम्ति यो नियमित प्रक्रिया हो ।
कृति: थिबिया चराको गीत
लेखकः चन्द्र रानाहोंछा
प्रकाशकः प्रतिभा प्रकाशन, बेलायत
मूल्य रु: २००/-
@ ‘नेपाल’ साप्ताहिक, २०७१ कार्तिक २ ।
« गजलमा समय–चेतना
नेपाली राजनीतिमा ‘अक्टोबर क्रान्ति’ »
One Response to “छुट्टै काव्यवाटिका”
हुलाक सेवा को अन्त्य हाम्रो जस्तो देशमा मात्र भएको हो । जहाँ हुलाक बाँकि रह्यो न प्रबिधि नै बिकास भएको छ । अन्य बिकाशसिल देशमा मानिसहरु, बिक्रेताहरु, सरकारि कार्यालय हरु, बिमा, हरेक क्षेत्रमा हुलाककै माध्यम प्रयोग हुन्छ । अहिले पनि बर्ष दिनमा अमेरिकामा लगभग करोडौं को संख्यामा पेपर मेल डेरिभर हुन्छ ।
बिकासको लागि हुलाक र बाटो नै सबै भन्दा अगाडि आउँछ ।
मलाई फेसबुकमा भेटाउनुस्
सरकारका नाममा खुला पत्र
कवितामा ग्रामीण भाका
कवितामा समयको पदचाप
कविताको अर्को घुम्ति
पूर्वका प्रतिनिधि कविता
क्रिकेटले बाँडेको खुसी
नेपाली राजनीतिमा ‘अक्टोबर क्रान्ति’
संविधानसभाका प्रमुख अन्तरवस्तु
कहिले बन्छ ‘उपभोक्तामैत्री’ बजार ?
हाङपाल on कवि, कविता र देश
Ruman on छुट्टै काव्यवाटिका
learn writing techniques on मलाई मात्रै ‘था छ…
Siksha Parajuli on कविताकै भाषा लिएर
Ramesh Chintak on यावत् नासोहरु
Copyright © प्रवीण बानियाँ | Prabin Baniya - A article writer - Powered by WordPress
This theme is sponsored by Carlton Don L Realtors Corporate Office along with Jumbo logo, California State University-Bakersfield, and birthday gift baskets
© All Rights Reserved. Prabin Baniya 2014 | Developed by: Umesh Ghimire